पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीको डिभोर्स ! किन गरिन् उनीले यस्ताे निर्णय ? – News Dainik
news २ चैत्र २०७६, आईतवार १२:०९ विविध प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र चर्चित सञ्चारकर्मी जीपी तिमिल्सिनाको वैवाहिक सम्बन्ध डिभोर्सको स्थितीमा पुगेको छ । केही समय पहिले वैवाहिक जीवनमा खटपट देखिएकाे हल्ला बजारमा चलेकाे थियाे । भर्खरै यसै विषयलाई लिएर पूर्व मिस नेपाल उषाले आफ्नो आधिकारीक फेसबुक मार्फत जानकारी दिएकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्,‘यदि विवाहको १७ वर्षपछि पनि शारीरिक र मानसिक यातना सहनुपर्छ भने यसलाई निरन्तरता दिने कुनै आधार छैन ।‘ अब म भन्छु ‘नो’।
गएराती लेखिएको स्टाटसमा उषाले थप्छिन् ‘तपाईंहरुको माया र समर्थनले मलाई बलियो र साहसिलो बनाएको छ । यसैमार्फत् म मेरो र आफ्ना सन्तानको अधिकारका लागि लड्नेछु ।’ जीपी र उषाको यसअगाडि पनि डिर्भोसको हल्ला चलेको भएता पनि दुवैले वास्तविकता नभएको वताउँदै आएका थिए ।
उषाको पति जीपी तिमिल्सिनासँग विवाद बढेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने टुंगोमा दुबै पुगेकाे हुन् । उनीहरुबीच सम्पत्ति बाँडफाँडको टुंगो लाग्न मात्रै बाँकी छ । एक छोरा र एक छोरीका आमा उषाले १७ वर्ष लामो वैवाहिक जीवन बिट मार्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
अघिल्लॊ माछापुच्छ्रे बैंकको कामू सीईओमा सन्तोष कोइराला
पछिल्लॊ एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई अब अकामा होटलमा छुट